Garbahaareey: Soo dhaweynti Macalin Maxamed waa bog cusub oo furmay
By ibrahim Aden shire August 05, 2017
Garbahaareey waa magaalo da'ahaan yar qiyaasti waxay jirtaa 40 sano. Dadkeedu siyaasad ahaan waa kuwa soo jeedo. waxaa lagu xantaa in saqiirkeedu siyaasiyiin yihiin. xaga mucaaradka waxay shabahdaa magaalooyinka Ximsa oo Suuriya ku taalo iyo Kuufa oo Ciraaq ku taal. sidii ay dowladi u dhacday majirin maamul gobalka soo maray oo macno leh oo ay taageertay.
Mucaaradkeedu maahan mid aanan wax ku filnayn. mansabka ay haysato iyo arimo kale owgood, cidday diidaan way adagtahay inay gobalka maamulaan. waxaa la xasuustaa si adkayd ee Itixaad ooga hortimid. Itixaad oo waqtiigisa ahaa awood aan la loodin karin maal ahaan iyo mururq ahaanba Garbahaareey waa mari waayay.
sidoo kale, ururka Shabaab ayaa u maaro waayay dagmadaan yar. muddadii Shabaabku gacanta ku hayay waxaa la tusay waji xiran iyo la shaqayn la'aan.caruurta waxay samayn jireen inay kabaha ka tuur-tuuraan askarta shabaabku inta ay masaajidda ku jiraan. waxaa dhacday in maalin mid u qaabilsanaa shabaab wacyi galinta isugu yeeray magaalada, ka dibna wacdi u jeediyay. xogaa markuu hadlayay ayaaa sidii caadada u ahayd wuxuu yiri TAKBIIR! wuxuu filayay inuu dhulka diryaami doono balse qof juuq yiri ma jirin.
marki la dhisay maamulka Jubbaland Garbahareey ma soo dhawayn. si aad ah ayay ooga hor timid, waxaana la xasuustaa shirarki is daba jooga ahaa ee lagu qaban jiray iyo abaabuladii looga soo horjeeday ee ka socon jiray. Xoog iyo xeelba waa lagu dayay balse laguma guulaysan. waxaa la xasuustaa in xatta ciidamada xabashida ee wadanka joogay loo adeegsaday inay dadka qasbaan iyadiina ka dar oo dibi dhal ayay ka dhigtay xaalka.
si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda muuqdo isbadal wanaagsan. Wasiirka wax barashada ee jubbaland oo safar ku marayay gobalka Gedo ayaa soo gaaray Garbahaareey. imaanshaha wasiirka waxaa lagu qaabilay soo dhaweyn ay wehliso qalbi furnaan. waxaa wadooyinka usoo baxay rag iyo dumar, caruur iyo ciroole calamo babbinayo.
waxaa la tusay waji furan iyo wanaag. waxaa loo muujiyay sidey dadka dagan Garbahaareey diyaar ugu yihiin ka mid noqoshada maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Islaan.
Talaabadaan ayaan u arkaa is badal xagga wanaaga loo qaaday. Inkastoo dhaliilo iyo tabashooyin jiraan, hadana in la taageero maamulka si nabad ahna loo raadsado xaqqa maqan waa arin laga maqsuudo.
Ma hubo waxa keenay is badalkaan iyo inuu sii jiri doono balse waxaa hubaal ah in maalinba maalinta ka danbayso dadku u bislaanayo hogaansanka iyo maamul jeceylka.